မန္တလေး မဟာမုနိ ဘုရားကြီး ပရိဝုဏ်၌ အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်သည့် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ သန့်စင်ခန်းမျ? - Yangon Media Group
မန္တလေး၊ ဇွန် ၁၈
မဟာမုနိဘုရားကြီး ပရိဝုဏ်အတွင်းရှိ ရာဟုထောင့် (အနောက်မြောက်ထောင့်)တွင် ဂေါပကအဖွဲ့၏ အစီအစဉ်ဖြင့် နိုင်ငံ တကာအဆင့်မီသန့်စင်ခန်းများကို တည်ဆောက်ပြီးစီးပြီ ဖြစ်သော ကြောင့် ဘုရားဖူးလာ ပြည်သူများ အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ပြီး မသန်စွမ်းသူ များအတွက်လည်း သီးသန့် သန့်စင်ခန်းကို ထည့်သွင်း စီစဉ်ပေးထား ကြောင်း သိရသည်။
”လာရောက်ကြတဲ့ သူတွေထဲမှာ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသည်တွေပါဝင်သလို ဘုရားဖူးလာ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ သန့်စင်ခန်းကို ပိုက်ဆံပေး ပြီးတော့မှ အသုံးပြုရတယ်ဆိုတာ မျိုးဟာ မဖြစ်သင့်တော့ဘူးလို့ ယူဆမိတဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ သန့်စင်ခန်းတွေအဖြစ် အချိန်ကာလ တစ်နှစ်အတွင်းမှာ ပြောင်းလဲ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အချိန်တိုင်းသန့်ရှင်း နေစေဖို့အတွက် ဝန်ထမ်းတွေကို Clean Pro ကုမ္ပဏီက သင်တန်း ဆရာတွေကနေ စနစ်တကျ သင် ကြားပေးထားပြီး နေ့စဉ် နံနက် ၄ နာရီခွဲမှ ည ၉ နာရီအထိ သန့်ရှင်း ရေးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ သန့်စင်ခန်းတွေကို အသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်း ခံရ တယ်ဆိုရင် ဂေါပကအဖွဲ့ရုံးခန်းကို လာရောက်တိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်။ ပရိဝုဏ်အတွင်းက တခြားနေရာ တွေမှာလည်း အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အဆင့်မြင့်သန့်စင်ခန်းတွေတိုးချဲ့ တည်ဆောက်နိုင်ဖို့တော့ လျာထား ပါတယ်”ဟု ဘုရားကြီး ဂေါပကအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးလင်းက ဇွန် ၁၈ ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြော ကြားသည်။
တည်ဆောက် ပြီးစီးသွားသည့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ သန့်စင်ခန်းအဆောက်အအုံတွင် သံဃာတော်သီးသန့်သုံး တစ်ခန်း၊ အမျိုးသားသုံး ရှစ်ခန်း၊ ဆီးကန် ခြောက်ကန်၊ အမျိုး သမီးသုံး ၁ဝ ခန်း၊ သီလရှင်သီးသန့် သုံး တစ်ခန်း၊ မသန်စွမ်း သီးသန့် သုံး တစ်ခန်းနှင့်အတူ လက်ဆေး ကန်များကို ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပြီး အပြင်ဘက်တွင် လုံခြုံရေး ဝန်ထမ်းများဖြင့် အလှည့်ကျချထား စောင့်ကြည့်ပေးလျက် ရှိသည်။ ယခုဂေါပကအဖွဲ့လက်ထက် နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်း၌ မဟာမုနိ ရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီး၏ နဖူး တော် ရောင်တော်ဖွင့်ခြင်း၊ စိန်ဖူး တော်၊ ငှက်မြတ်နားတော်၊ ရွှေသား ထီးတော် ရောင်တော်ဖွင့်ခြင်း၊ ရုပ် ရှင်တော်မြတ်ကြီး စံပါယ်ရာပလ္လင် တော်နှင့် အတွင်းတော်နံရံများအား ရွှေစင်ရွှေပြားများ ဆက်ကပ်ခြင်း၊ ရွှေကျောင်းပြာသာဒ်တော်ကြီး ဘုံ ခုနစ်ဆင့်နှင့် အရံစေတီတော်များ ကို ရွှေသင်္ကန်းအသစ်ကပ်လှူခြင်း၊ ပြာသာဒ်တော်ကြီးအား မီးတိုင်ကြီး လေးတိုင်ဖြင့် လျှပ်စစ်မီးပူဇော်ခြင်းစသည့် ထူးခြားလှသော အလှူဒါန များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
လယ်မြေပေါ်တွင် ကျူးကျော် ဝင်ရောက် စိုက်ပျိုးမှုကို ဖြေရှင်းမပေး၍ မုံရွာမြို့၌ တောင်သူတစ်ဦ??
နှစ်ပေါင်း ၇ဝ ကျော်အတွင်းမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည့် ပြဿနာများကို စားပွဲဝိုင်းပေါ်တွင် အပြန်အလှ?
ပေါ့ဘာနှင့် ဒမ်ဘီလီ တို့ အပေါ် လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှု ဖီဖာစုံစမ်းမည်